Filazam-baovao faha-53 -
Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-53
TARATASY MISOKATRA HO AN’ANDRIAMATOA PRAIMINISTRA
Izay hampahafantatra ny Antenimieram-pirenena ny fandaharan’asany hanatanterahana ny Fandaharan’asam-pirenen’ny Governemanta ny faha-9 Mey 2016
Izahay mpikambana ato amin’ny Fikambanana TANY Miaro ny Tany Malagasy, dia mirary ny fanendren’ny Filoham-pirenena anao amin’ny toerana miantsoroka ny andraikitra goavan’ny Praiministr’i Madagasikara mba hanalefaka ny vesatry ny fahoriana izay iainan’ny ankamaroan’ny vahoaka malagasy ary maniry hisintona ny sainao amin’ny lohahevitra iray mavaivay amin’izao fotoana izao.
Misy volavolan-dalàna mikasika ny tanin’olon-tsotra vita titra, izay ifanakalozana amin’izao fotoana izao eo anivon’ny ministera, mirakitra andalana iray izay mitady hanome zo mitovy amin’ny fizakana tany ho an’ny Malagasy sy ny vahiny (1)
Manaraka izany, ny andalana faha-99 ao amin’io volavolan-dalàna io dia milaza fa : « Ny fahazoan’ny vahiny fitompoana amin’ny tany dia hanaraka ny fepetra manokana mikasika izany, ary indrindra ny lalàna laharana faha- 2003-029 tamin’ny 27 aogositra 2003». Ny fahazoana fitompoana tany ho an’ny vahiny no ho resahanay, izay ao amin’ny lalàna laharana 2003-028 izay nanan-kery nanomboka tamin’io andro io koa, araka ny fahalalanay azy. (2)
Ny Fikambanana TANY sy ny fikambanana ao amin’ny fiaraha-monim-pirenena Malagasy hafa dia efa nandefa antso avo volana maro lasa izao mba hanoherana ny fironan’ny mpitondra sy mpandray fanapaha-kevitra eto Madagasikara hanao sorona ny ho avin’ny ankamaroan’ny Malagasy mba hanomezana fahafaham-po ny mpamatsy vola avy any ivelany (3)
Tsy ny fanomezana tanteraka ny tany ho an’ny vahiny no hanatsara ny « toetoetry ny fandraharahana ».
Iarahan’ny Olompirenena eto Madagasikara sy eran-tany mahalala fa ny antony lehibe indrindra maha-savolaina ny mpampiasa vola tsy ho avy (na tsy hiverina) eto amin’ny Nosy dia ny tsy fahatokisan’ny mpampiasa vola teratany sy vahiny (4) ny fomba fitantanan’ny mpitondra sy ny vokatra azo amin’ny asany. Manampy an’ireo ny tsy fahampian’ny fotodrafitrasa, indrindra ny làlana, sy ny fitomboan’ny tsy faharetan’ny fisian’ny herin’aratra ka manjary miteraka fahasarotan’ny fanatanterahana sy fiteraham-bokatra ho an’ny famokarana taozavatra rehetra.
Tsy te-hamaha izany olana izany na tsy mahavita mamaha ireo olana ireo ny mpitondra sy mpanapa-kevitra ka ny tany no ataony varo-boba amin’ny vahiny, ny tany izay masina manoloana ny razamben’ny Malagasy ary manan-danja sarobidy ho an’ny fahafaha-mivelona, ho an’ny fivoaran’ny mpiara-belona ankehitrio sy ny taranaka ho avy.
Ny lalàna 2003-028 dia napetraka sy nampiharina tamin’ny 2003 mba ahafahana manome tany ho tena fananany ny orinasa mitondra petra-bola avy any ivelany izay mikasa hampiasa vola mihoatry ny 500 000 dôlara amerikana teto Madagasikara. Tsy nahafa-po angamba ny fahatongavan’ny mpampiasa vola taorian’izay no nahatonga ny tarika teo amin’ny fitondrana tamin’izany fotoana izany namolavola sy nampandany ny lalàna 2007-036 izay nanala ny fepetra momba ny vola 500 000 dôlara.
Firy ny mpampiasa vola hentitra sy nahay ny asany tonga teto Madagasikara taorian’izay ? Fampandrosoana ho an’ny Malagasy tahaka inona no nentin’ireo tombotsoa manokana nomen’ny fitondràna nisesy ny mpampiasa vola ? Ny firenentsika izao any amin’ny farany ambany indrindra amin’ny antontan’isa eran-tany, miha-mitotongana hatrany ny fari-piainan’ny ankabeazan’ny mponina.
Ny Malagasy mpitondra sy mpandray fanapaha-kevitra no tompon’andraikitra, misy rafitra iraisam-pirenena miray tsikombakomba aminy.
Eo an-danin’izany dia misy rafitra sy fikambanana iraisam-pirenena samihafa manindry sy mamporisika ho amin’ny fialan’ny Fanjakàna tsikelikely amin’ny fitantanana ny firenena ara-toe-karena fa hamela izany hiandraiketan’ny orinasa tsy miankina amin’ny Fanjakàna. Tamin’ny taona 1980 ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena (FMI) sy ny Banky Iraisampirenena (Banque Mondiale) dia nanery ny hampiharana ny «fanitsiana ara-drafitra » (ajustement structurel) ka nisy tany sy trano izay nalain’ny vahiny ho fananany tao anatin’ny fanovàna ho fananan’ny rafitra tsy miankina ny orinasam-panjakana (privatisation).
Tamin’ny taona 2013, ny Fikambanana TANY dia nanao antso avo fanairana manoloana ny tetikasan’ny Komitin’ny Ranomasimbe Indianina (COI, Commission de l’Océan Indien) hanao an’i « Madagasikara, sompitry ny Oseana Indiana » - izay voalaza fa ny zava-kendreny dia hiantoka ny fahampiana ara-sakafo ao amin’ny nosy dimy eto amin’ny Indianoseania. Ny fikendrena hahazo tany malagasy anefa zara raha voaafina (5). Ny fahatrarana ny zava-kendren’io tetikasa io dia mampanahy mafy ny mpandinika mahira-tsaina (6) ary ny loza mananontanona ny Malagasy eo amin’ny tsy fahampiana sy tsy fananana fahaleovan-tena ara-tsakafo dia mivandravandra satria homena ny laharam-pahamehana ny fanondranana ny vokatra ho an’ny sakafo any ivelany.
Taorian’ny fivorian’ny mpamatsy vola io tetikasan’ny Komitin’ny Ranomasimbe Indianina, izay natao tamin’ny febroary 2015 (7), dia nanao « fandinihina ny politika sy fomba fanaon’i Madagasikara » (8) eo amin’ny Varotra ny Fikambanana Eran-tany momba ny Varotra (OMC). Tamin’ny fivorian’ny OMC volana novambra 2015 no navoaka ny tatitra nataon’ny Sampan-draharahan’ny Firenena Mikambana momba ny Varotra sy ny Fampivoarana (CNUCED) momba an’i Madagasikara mitondra ny lohateny hoe « Fandinihina ny Politikan’ny Fampiasam-bola ». Milaza io tatitra io ao amin’ny hafatrafatra apetrany fa « ny hakelezan’ny fahafahan’ny vahiny hanana fitompoana amin’ny tany dia mety miteraka sakana ho an’ny fampiasam-bola » ka tsara raha « Hatao mazava kokoa ny fepetra mikasika ny fahafahan’ny vahiny ho tompon’ny tany » (…). « Satria nahato tamin’ny 2009 ny fahafahan’ny vahiny mahazo tany, arak’io rafitra io, (...) dia manafatrafatra izy hoe
Raha ho tsoahana ilay fampiatoana, dia ataovy mandeha ho azy miankina amin’ny fanajàna fepetra mitombona, mazava ary voafaritra mialoha, voasoratra ao anatin’ny Lalàna mikasika ny Fampiasam-bola mba ahatonga ny lalàna ho fantatra mialoha ;
Raha ho tazonina ny fampiatoana, dia tsohay ny fepetra mikasika ny alàlana fahazoana ho tompon’ny tany ao amin’ny Lalàna mikasika ny Fampiasam-bola »(9).
Andriamatoa Praiminisitra, Ny Ministry ny Tao-zava-baventy teo aloha izay lasa Ministra miandraikitra ny Fananantany ao amin’ny governemanta izay tarihinao, dia niaro foana io tatitry ny CNUCED io (10). Moa ve notendrena eo amin’io toerana vaovao io izy mba hametraka ny fanovàna ny lalàna izay hanome zo mitovy ho an’ny Malagasy sy ny vahiny amin’ny fananan-tany ? Iza no naka ny fanapaha-kevitra momba ny safidy hanalalaka ny fahafahana mahazo tany ho an’ny vahiny rehetra ?
Maro ny Malagasy sy Olompirenena eran-tany no manontani-tena hoe : Fa maninona ny mpitondra malagasy no manao fanomezan-toky manimba ny tombotsoan’ny Malagasy toa izany ? Inona no nampanantenaina azy ary inona no takalony ? Mba tsy hitanisàna afa-tsy ohatra vitsivitsy : Marc Ravalomanana, izay somary nirona tamin’ny fandokafana ny fepetra mampiseho ny maha-“tia tanindrazana” azy ny mpanohana azy, no nanasonia ny fahafahana mampihatra ny lalàna 2003-28 sy 2007-036 izay nanome voalohany alàlana ny orinasa vahiny hividy tany teto Madagasikara. Ny fitondràny avy eo no nanomboka nifampiraharaha momba ny tetikasa Daewoo izay miantona amin’izao fotoana izao. Tamin’ny 2014, vao tonga teo amin’ny fitondràna i Hery Rajaonarimampianina, dia nanao antso avo tamin’ny mpampiasa vola tany Frantsa sy Afrika atsimo ary Israely mba ho avy haka ny tany izay « tsy misy mampiasa » aty Madagasikara. Nandritry ny Teteza-mita no najoro ny orinasa Madagascar Development Corporation, fiombonan’antoky ny Fanjakàna Malagasy (15%) sy ny Tahirim-bola sinoa China International Fund (85%) nikendry ny hampiasa vola any amin’ny ankamaroan’ny sehatra ara-toe-karena. (11)
Mendrika hanaovana fikarohana lalina kokoa ny rohy manokana mampifandray ny rafitra iraisam-pirenena sy hery vahiny samihafa amin’ireo tarika nisesy teo amin’ny fitondrana sy ny tsirairay amin’ireo manam-pahefana malagasy.
Tsy tena mitondra tombony ho an’ny fivoaran’i Madagasikara ny fampiasam-bola avy any ivelany
Ny hevitra entin’ny mpitondra sy mpandray fanapaha-kevitra ary manam-pahaizana malagasy sy avy any ivelany hanamarinana ireo safidy sy fihetsika ireo dia ny « fampandrosoana an’i Madagasikara » izay tsy vitan’ny olompirenena malagasy hono ny miantoka azy.
Ahoana moa no mba mety ahatonga ity firenena ity hihena ny fahantrany na hiha-manankarena kokoa, rehefa tsy mampandoa hetra sy haba samihafa ireo orinasa goavana ny lalàna Malagasy momba ny fanorenana fanajarianasa afa-kaba (zones franches), ny fifanekena toy ny an’ny QMM, sy ireo fifanarahana momba ny fiombonan’antoka nosoniavin’i Madagasikara tamin’ny firenena mandroso samihafa maro ? Ilay orinasa marorantsana matanjaka QMM-Rio Tinto izay nanomboka nitrandraka tamin’ny 2009 dia tsy nanasonia ny fifanaraha-panofàna tany raha tsy tamin’ny taona 2012, voatery naverina nosoniavina io - nisy « fifanarahana-lasitra » koa vao aingana satria nisy zavatra tsy azo nekena tao amin’ilay fifanaraha-panofàna tany voalohany. Manginy fotsiny ny isan’ny asa noforonina ho an’ny Malagasy izay tena nandiso fanantenana sy ny fiantraika ratsin’io tetikasa io tamin’ny vondron’ny mponina any ifotony voaraoka teo amin’ny taniny (16). Ny vaovao azo tamin’ny desambra 2015 dia manamarina fa tsy mbola notanterahan’ny orinasa Ambatovy foana ny fandoavana ny tambiny tokony aloany amin’ny kaomina misy ny toeram-pitrandrahany (16). Io orinasa io koa dia nanao antoka tany amin’ny banky any ivelany ny ampahan’ny tany nampanofaina taminy tao anatin’ny fifanaraham-mpanofàna amin’ny fomba maharitra, ka manahy mafy izahay amin’ny mety ahaverezan’i Madagasikara ireo tany ireo manoloana ny fahasahiranan’io orinasa io amin’izao fotoana izao sy ny vidin’ny akora ambany be eo amin’ny tsena iraisam-pirenena.
Tsy misy fanantenana fivoaran’ny firenena eo amin’ny lafiny ara-toe-karena marim-pototra sy maharitra, raha mbola kely foana ny fampitomboana ny ampahan’ny vokatry ny fitrandrahana anjaran’ny firenena malagasy (redevances) ataon’ireo mpitondra sy mpandray fanapaha-kevitra soso-kevitra ao amin’ny volavola fanavaozana ny Fehezan-dalàna momba ny harena an-kibon’ny tany (Code minier) ao amin’ity firenena manana harena ankibon’ny tany marobe ity (12). Eo andanin’izay anefa izy dia voatery mindrana vola tapitrisa dôlara maro amin’ny banky samihafa hanaovana foto-drafitrasa momba ny fambolena, hamokarana angovo ary hanamboarana làlana (13).
Amin’ny ankapobeny, ny “lalàna manan-kery dia tsy nitsinjo tamin’ny fametrahana fepetra mazava ho an’ny mpampiasa vola mikasika ny tsy maintsy hampiharana fomba fizaràna tombotsoa amin’ny mponina, fa mampanaram-po be mihitsy ny tombotsoa ho an’ny mpampiasa vola » araka ny tatitra fanombanana iray nampanaovin’ny Banky Iraisam-pirenena, ao amin’ny tapany mikasika ny fampiasam-bola amin’ny tany midadasika (14). Eo andanin’izay anefa, nisy fanisàna ny tompon-tany natao tamin’ny fiandohan’ny taona 2016 tany amin’ny tanàna toa an’Antsiranana-Diégo-Suarez, notohanan’ny Pole Intégré de Croissance –n’ny Banky Iraisampirenena, mba ahazoana antoka ny fandoavan’ny mponina rehetra ny hetra momba ny tany (15). Tsy mitsahatra koa ary tsy tanty intsony ny fitomboan’ny fanerena ny mpandraharaha Malagasy madinika sy salasalany any amin’ny faritra rehetra amin’ny fitakiana hetra efa an-taonany maromaro izao.
Koa ny fikasàna mbola hampitombo isa indray ny tombotsoan’ny mpampiasa vola avy any ivelany, Andriamatoa Praiministra, dia ahiana hampahantra ny ankabeazan’ny Malagasy amin’ny fomba vao maika hampikiakiaka !
Ny fanomezana titra fananan-tany ny vahiny rehetra dia hiteraka fanjanahantany vaovao ho an’ny Malagasy
Maro ireo fandraharahana ara-pambolena tanatin’ireo tetikasa 50 nampiasana vola ho an’ny fambolena midadasika tamin’ny tany mirefy mihoatry ny 1 000 hekitara voaisa tao anelanelan’ny 2005 sy 2011 izay nampiasa ireo fomba fiasa sy teknolojian’ny « agro-industrie » (agro-business) no tsy nahomby noho ny antony samihafa. Mampiseho izany fa ny olana fototra amin’ny fambolena ao Madagasikara dia tsy miankina amin’ny fahadisoana na tsy fanana- traikefan’ny tantsaha malagasy miasa araka ny fambolena ara-pianakaviana sy araka ny fomban’ ny tantsaha. Ny finiavana hanolo azy amin’ny orinasa sy mpamboly avy any amin’ny tany hafa dia tsy vaha-olana ho an’ny fahavitàn-tena ara-sakafo, na ho an’i Madagasikara, na ho an’ny Indianoseania.
Ankoatr’izay, ny fanomezana zo mitovy eo amin’ny « fanoràtana ny fananana tsy mihetsika », izany hoe ny fizakàna fitompoana sy fahazoana titra fananantany, ho an’ny orinasa sy olontsotra tsy malagasy na avy any ivelany, dia tsy hiteraka rafitra mira lenta (hanjakàn’ny fitoviana) araka ny nosoratan’ny mpanao gazety (5) fa hanilika kosa ny tantsaha sy olompirenena malagasy avy amin’ny tany nolovainy tamin’ny razany sy avy amin’ny sombintany novolen’ny fianankaviana malagasy mba hivelomana.
Araky ny tsy maintsy efa fantatrao mantsy, Andriamatoa Praiministra, dia mitaky fotoana be sy vola be ny fahazoana titra fananan-tany. Ny ankamaroan’ny Malagasy dia miaina eo amin’ny taniny tsy misy titra fananan-tany ary mihoatry ny 1 000 amin’ireo kaomina 1693 no tsy manana BIF (Birao Ifotony momba ny Fananantany) izay hany afaka manome kara-tany (certificats fanciers). Ny fahantrana lalina misy ny ankabeazan’ny Malagasy tsy manan-karem-be amin’izao fotoana izao dia tsy ahafahany hifaninana miralenta amin’ny olona vahiny, fanampin’izany ny mpampiasa vola sy ny orinasa manana petra-bola avy any ivelany dia mahazo ny fanampian’ny EDBM (Economic Development Board of Madagascar) izay manatanteraka sy manafaingana ny fampiraharahana ara-panjakana ho azy ireo.
Raha sendra ekena ny andalana faha-8 sy 99 amin’ny volavolan-dalàna momba ny tanin’olontsotra vita titra dia ahiana ho voasoratra amin’ny vahiny anatin’ny fotoana fohy ny fitambaran’ny tany eto amin’ny firenena ka ny ankamaroan’ny Malagasy dia tandidomin-doza ho voaraoka mandrakizay avy eo amin’ny taniny, satria ny titra dia « tsy azo toherina » ary « maharitra hatramin’ny farany » araky ny voasoratra ao amin’ilay volavolan-dalàna.
Ilaina sy manampy ny fampiasam-bola, manatsara ny rehetra ny fiaraha-miasa sy ny fifanakalozana amin’ny olom-pirenen’ny tany hafa, fa tsy tokony ho tonga hatramin’ny fivarotana tanindrazana ny takalon’izany. Raha ny mpitranga dia miady varotra ny fiarovana ny tombontsoany sy tombom-barony ny andaniny isanisany mialoha ny hanasoniavana fifanarahana. Ny tena tokony ho tanjon’ny tompon’andraikitra malagasy amin’ireny fifampiraharahana ireny dia ny hanaovana ho lohan-daharam-pahamehana ny tombontsoan’ny olom-pirenena sy tantsaha maro an’isa sy ny hiarovana ny zon’izy ireo amin’ny tany malagasy. Ny fampitanjahana azy ireo tsy hizaka intsony ny zony amin’ny tany, toy izay kendren’io volavolan-dalàna io, dia hevitra tsy mandray andraikitra sy tsy azo ekena.
Ireo fitakiana sy soso-kevitry ny Fikambanana TANY
Ny fahafahan’ny vahiny manana tany misy titra dia tokony ho esorina avy tao anatin’io volavolan-dalàna momba ny tanin’olon-tsotra vita titra io. Tokony ary tsy maintsy hajanona ho fananana iombonan’ny Malagasy rehetra amin’ny maha-« tanindrazana » azy i Madagasikara. Fady hatry ny ela ny « mivarotra ny tany amin’ny vahiny » eo amin’ny kolotsaina Malagasy (16).
Maro be ny hetsi-panoheran’ny Olom-pirenena Malagasy ny fangoronan-tany any amin’ny faritra rehetra no aelin’ny tambazotra sôsialy sy ny mpampiely vaovao (17). Toy ny Olom-pirenen’ny tany hafa (18), ny Olom-pirenena Malagasy maro an’isa dia tsy hanaiky ny hanesorana aminy ny taniny, izay fananany lafo vidy indrindra, ary hany fananan’ny tantsaha Malagasy maro.
Ankehitriny, ny mponin’ny faritra Sofia dia mihetsika manohitra ny fangoronan’ny Sinoa ny taniny (17). Hazavao amin’ny Solom-bavam-bahoaka sy amin’ny vahoaka izay mitranga, Andriamatoa Piraiministra, ary asaivo averin’ny tompon’andraikitra amin’ny mponin’ny faritra Sofia ny tanin’izy ireo !
Ny Fikambanana TANY dia mamerina ny fangatahany ny hanelezana amin’ny Olom-pirenena rehetra amin’ny alalana tranokala iray ny vaovao mahakasika ireo tanim-panjakàna efa voavarotra sy ampanofaina ka izany dia tovanana ny antsipiriany isanisany momba ny fifanekena natao. Nisy ady hevitra momba izany nandritry ny fivoriana niarahan’ny ministera maro taorian’ny tapany voalohan’ny fitiliana ireo tanim-panjakàna ka mbola miandry ny vokany izahay mandrak’ankehitriny. Manana zo ahafantatra izay nanaovan’ny tompon’andraikitra nifanesy ny tany eto Madagasikara ny Olom-pirenena Malagasy.
Vao avy nanasonia fifanekena momba ny Faritra Manokana ho an’ny Fiharian-karena (Zone Economique Spéciale) aorina ao Taolagnaro-Fort-Dauphin ny Nosy Maurice sy Madagasikara (19). Varotra ve izany sa fampanofàna mandritry ny fotoana ela (na « bail emphytéotique ») ? Raha fampanofana, hoatrinona ary maharitra hafiriana ? Firy ny velaran-tany voaray ao ary inona no famokarana hatao ao ? Firy no asa handrasana ?
Toa nanao sonia fifanarahana « hanomezana sombin-tany miisa roa arivo (2000) ho ana Silamo » ny Fanjakàna. Inona avy no lazain’ny fifanarahana ? Iza avy ireo mahazo tombontsoa ? Inona avy ny tanjona ? (20)
Ny Fikambanana TANY dia manamafy ny soso-keviny ny amin’ny handaminana ny fandraisan ‘ny Olom-pirenena Malagasy rehetra anjara amin’ny fifehezana sy fitantanana ny tany any amin’ny kaominina tsirairay. (Jereo filazam-baovao TANY faha-20) manoloana ny fitondran-draharaha momba ny tany tsy mangarahara sy betsaka ho kianina ataon’ireo mpiandraikitra nasionaly sy ireo manam-pahefana any ifotony.
Farany, Andriamatoa Piraiminisitra, ny « Lalàna Sori-jotra momba ny Fanajariana ny Tany » (Loi d’Orientation sur l’Aménagement du Territoire) lany tamin’ny fivorian’ny Antenimieram-pirenena farany teo dia milaza, ao amin’ny andininy faha-14, fa ny Praiminisitra no « manapaka ny fepetra ampihàrana ny Fanajariana ny Tany miaraka amin’ny Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefàna ». Io lalàna io dia mikendry « hiantoka fitsinjarana mirindra eo amin’ny mponina sy ny asa aman-draharaha manerana ny Firenena manontolo » sy « hiantoka ny fifanjohian’ny (cohérence) asa aman-draharaha ho an’ny tombotsoan’ny besinimaro sy ho an’ny sehatra tsy miankina izay samy mitondra ny anjarany amin’ny fampivoarana ara-toekarena sy ara-sosialy eo amin’ny Firenena ». (araka ilay volavolan-dalàna fa tsy mbola niparitaka amin’ny besinimaro ny lalàna lany)
Mba ahatrarana ireo tanjona ireo sy hampirindrana ny lalàna aminy, dia manolotra soso-kevitra ny Fikambanana TANY ho ny fanolorana volavolan-dalàna hanaiky ho ara-dalàna ny zo fampiasàna ny tany araka ny fombam-piaraha-monina eo amin’ny telo am-pahefatry ny sombin-tany manerana an’i Madagasikara manontolo, izay tsy manana sora-pizakan-tany sy taratasy fanamarinam-pizakan-tany (titra sy kara-tany), no homena loha-laharam-pahamehana ao amin’ny Ministeram-panjakàna misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena, ny Fanajariana ny Tany sy ny Fampitaovana, izay miandraikitra ny Fananan-tany : izany dia ho fampiharana ny Torolàlana am-piniavana ho an’ny fitantanana amin’ny fomba tompon’andraikitra ireo fitsipi-pifehezana fananan-tany azo ampiharina amin’ny tany, ny jono ary ny ala ao anatin’ny fibanjinana ny fahazoana antoka ny fahampiana ara-sakafo (Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale) nolanian’ny Komitin’ny Fahazoana antoka ny Ara-sakafo (Comité de Sécurité Alimentaire) tamin’ny mey 2012 (21) mba ahazoan’ny tantsaha sy ny vondrom-bahoaka ifotony ary ny vahoaka malagasy maro an’isa antoka ny amin’ny zony amin’ny taniny.
Ny Fikambanana TANY dia haneho tsy ho ela ny heviny mahakasika ny lafiny hafa amin’ny volavolan-dalàna momba ny tanin’olon-tsotra vita titra. Dien’izao ny Fikambanana TANY dia mangataka ny hanesorana ireo andininy mamela ny fahazoan’ny vahiny titra fananan-tany - indrindra fa ny andininy faha-8 sy 99 - satria hampidi-doza ho an’ny fampandrosoana sy ny hoavin’ny Malagasy maro an’isa izany.
Misaotra anao izahay, Andriamatoa Praiministra, amin’ny finiavanao hifantoka amin’ny fitakianay sy amin’ny vahaolana tena ho an’ny tombotsoa sy fivoaran’ny vahoaka malagasy izay hirosoanao.
Parisy faha 7 mey 2016
(Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY)
Ny dikan-teny frantsay-n’ity fanambaràna ity dia azonao takarina ao amin’ny http://terresmalgaches.info/spip.ph...